[Ankapobeny ] 30 Desambra, 2008 07:21
Kilalao tamberina 2008
Ity misy kilalao kely atolotro anareo mpitsidika eto @ news2dago dia mba mametraka tamberina kely ny taona 2008 ianareo asa na atao taga taga izy ity na tsy haiko fa ny fanirina dia ny handraisantsika rehetra anjara fotsiny. Manaraka izay dia mba mitsatoka ny mety hisongadina @ taona 2009 ihany koa.
Ny zavatra tadidiko t@ ity taona hadiva hifarana ity ohatra dia nodimandry i Rado sy Herizo Razafimahaleo. Ny lalao olimpika izay nahazon'i Phelps sy Bolt medaily volamena sy nadravan'ny zavabita tsara indrindra h@ izay. Eo koa ny nahalany an'i Barack Obama izay mainty voalohany hitondra an'i Bekintana. Eo @ resaka aterineto dia namoaka filomanosana @ aterineto indray ny google dia ny google chrome izany
Ny mety hisongadina @ taona ho avy kosa dia miongana @ izay i Robert Mugabe. Ary mety hiova pds kosa ny hitondra ny tanan'Antananarivo. Miandry izay handimby an'i Jentlisa kosa eo @ bombs @ teny malagasy???
Dia mirary taom-baovao 2009 ho antsika rehetra.
[Ankapobeny ] 27 Desambra, 2008 07:28
Afa bizana ihany
Valaka t@ fety teo dia tsy nahasokatra blaogy mihitsy omaly! t@ krismasy koa saika mba hanao update kely ny lahatsoratra kanjo tsy tafiditra mihitsy na tao @ namana serasera na takelaka na blaogy dia nakatona ny aterineto de naleo nitaiza zaza e!
Feno ihany mantsy ny progany t@ krismasy teo nifoha maraina tokoa moa izany t@ 4 ora dia efa nanao rano handrona. T@ 5 ora dia efa vita homana tsara daholo izahay hatr@ papozy kely izay hanao krismasy voalohany @ fiainany endrey nitsikitsiky ery izy tsy tsarony akory oe mbola tokony hatory anie. Tonga tao am-piangonana t@ 6 ora latsaka fahefany maraina efa feno hipoka ny tao @ rihina ambany dia tany ambony no nipetraka izahay telo mianaka kely fa mba afaka nisafidy ihany aloha dia nitoetra teo @ izay nahamandry tsara ny saina. Ny fotoana moa @ 6 ora sasany vao manomboka.
Fa nametram-panotaniana ihany oe ary makaiza daholo ary ireto olona ireto rehefa alahady e? zara ary anefa mba misy krismasy mba afaka mivavaka ny rehetra. Misy koa anefa olona sasany tena mivavaka isan'alahady foana fa tsy mandeha kosa anefa rehefa andro fety!!! Angamba tsy te hisisika @ seza? Naredona ery ny hira tao am-piangonana no sady hira manetana fanahy koa moa no atao rehefa krismasy toy izao ka mba nanezakezaka ery na dia mpamala-kira aza! lol
Nirava izahay t@ 9 ora katroka! Hendry tsara i Fanilo kely ka tsy dia sahirana izahay. Nody nisolo akanjo aloha vao hamonjy ny fiarahana misakafo any @ fianakavina. Nahafinarira ny fiarahana fa saingy tsy nahovoka akory aho nony tena oe hisakafo!!! dia nojeren'ny vilia sy sotro teo fotsiny e. Efa hariva tany @ 7 ora sy sasany tany izahay vao namonjy fodina. Mbola hampandro zaza avy eo somary natao nafanafana ny rano @ izay izy afa-bizana tsara.
Dia toy izay sy izay ny fety taty @nay. Tany @ 9 ora alina tany vao nanomboka nandefa sms hiarahaba ireo havana akaiky nirary soa tratry ny fety. Efa mba nahatsiaro aloha dia angamba tsy ho tezitra izy ireo. Miandry ny @ herinandro indray isika e. Mbola mety mahasoratra ihany aloha angamba fa tsy hiletika be kosa e!
[Ankapobeny ] 24 Desambra, 2008 13:43
Mirary Krismasy antsika rehetra
Eo ampiandrasana ny higadonan'ny fety ary dia faly miarahaba antsika rehetra sahady ary mirary anareo rehetra hanao fety sambatra daholo. Manararaotra sahady maka avance kely satria tena fantatro fa tsy hahasoratra mihitsy a rahampitso fa mbola hitolona an'ilay henakisoa sy vorotsiloza mendimendy ao. LOL
ireto ary ny fanomezana avy aty @ news2dago e! samia ary maka izay tiany. Misy ny efa nahazo fa omena ihany koa ireo izay mbola tsy nahazo.
Avia ry mino.mp3
In excelsis Gloria.mp3
[Politika ] 22 Desambra, 2008 15:59